BURUNDI oo hal sabab ku diiday in ciidamadadeeda ay kala baxdo Somalia - Caasimada Online
Home Warar BURUNDI oo hal sabab ku diiday in ciidamadadeeda ay kala baxdo...
BURUNDI oo hal sabab ku diiday in ciidamadadeeda ay kala baxdo Somalia
Muqdisho (Caasimda Online) – Dowladda Burundi ayaa si cad u sheegtay in ciidamadeeda aysan kala baxeynin gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo qeyb ka ah howlgalka AMISOM ee ka socdo dalka Soomaaliya.
Saraakiil u hadashay dowladda Burundi ayaa sheegay in ciidamada Burundi ee kusugan Soomaaliya ay ka baxayaan dalka marka dhamaan dalalka ciidamada ay ka joogaan Somalia ay bilaabaan in ciidamadooda ay ka saaraan Somalia.
Go’aanka askarta Burundi looga saarayo Soomaaliya waxaa soo jeediyay Midowga Africa, waxaana afhayeen u hadlay dowladda Burundi uu sheegay in go’aankaasi kaliya uu saameynayo ciidamadooda Jooga Somalia.
Afhayeenka ciidamada Milatariga Dalka Burundi oo lagu magacaabo Floribert Biyereke, ayaa sheegay in Burundi aysan 1,000 ka mid ah Askarteeda ka saareyn Soomaaliya Waxaana uu sheegay in Burundi kaligeed ay hal mar Kun askari ka saarto Soomaaliya aysan soconeyn.
Midowga Afrika sarkaal ka tirsan oo diiday in magaciisa la sheego ayaa yiri “Ciidanka Burundi waa kuwa mushaar aad u yar ku qaata dalkooda, AMISOM ayaa u mushaar badan, sidoo kale aad uma qalabeysna, ciidanka Burundi”.